Imebe Web Design | Martech Zone
Nzube Weebụ Zaghachi
Thursday, August 2, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ok, emeela m agadi ka m wee cheta nke a mana ụmụ m nwere ike ọ gaghị enwe ike. You chetara mgbe anyị nwere ike idozi ụgbọ ala? Ezigbo ihe eji arụ ọrụ Sears ma anyị dịkwa mma ịga… naanị mkpa ụfọdụ akwa na ụfọdụ anụ ahụ ma ị nwere ike idozi nsogbu ọ bụla na ụgbọ ala. Ọ bụghịkwa ọzọ. Amachaghị m otú m ga-esi mepee mkpuchi ụgbọ ala m.
Ka m na-ele anya anabata web design, Amalitere m inweta mmetụta ahụ. Nye m HTML, CSS, na jQuery na abụ m nwa nwoke nwere obi ụtọ. Mana bido iberi ma pusi peeji ka o na eme na obosara nke ngwa a ma amalitere m inwe mgbagwoju anya. Ọ bụ mgbe m nanị ina onye Mmepụta aka na m gaa na ọzọ …rrr .. ihe ndị dị mkpa (dị ka arụmụka ndị mmadụ na Facebook).
Adịghị m ere ere kpamkpam n'ihi na echeghị m na ndị mmadụ chọrọ ihe dabara n'ime ngwaọrụ ha ọzọ. Achọrọ m ka iPad nweta atụmatụ ndị na-erite uru nke swiping na mbugharị. Achọrọ m ahụmịhe mkpanaka m ka m were slide na swipe ihe ka ọ dị mfe ịnyagharịa na ịchọgharị. Amaghị m na a ga-etinyerịrị otu ihe nchọgharị na atụmatụ ndị ahụ na ngwaọrụ ọ bụla. Ahụmịhe nke ngwaọrụ ọ bụla na-amasị m na ịhụnanya mgbe saịtị weebụ na-ewulite ahụmịhe kwekọrọ.
Na agbanyeghị… M ga-esi n'ala ụkwụ m pụọ. Nke a bụ nnukwu infographic sitere na TemplateMonster na ntanetị weebụ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ n’ezie ịhụ ihe dị mma… pịa site na nke ha anabata, ihe ọmụma mmekọrịta maka ahụmịhe oyi.
Tags: anabatana-anabata webanabata web designifeanyiukwu
Douglas Karr Thursday, August 2, 2012 Sunday, September 8, 2013
Logo Design Styles na mmụọ nsọ
Nlekọta Google na nchịkọta Google… Meh